आक्रामक वृद्धि भएको आजको बजारमा के छन् आजका सकारात्मक पक्ष ? - नेपालबहस
आक्रामक वृद्धि भएको आजको बजारमा के छन् आजका सकारात्मक पक्ष ?
| १८:२९:०९ मा प्रकाशित
फाल्गुन ३, काठमाडाैं । केही समयको करेक्सन पश्चात आज बजार आक्रामक रुपमा वृद्धि भएको छ। दोश्रो बजारले आज निकै आकर्षक प्रवित्ति बनाएको छ । नेप्से परिसूचक ९२ दशमलव ४२ अंकले वृद्धि हुँदै २५८६ दशमवल ०१ को विन्दुमा बन्द भएको छ । नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा १० अर्ब ३८ करोडको शेयर कारोवार भएको छ ।
लघुवित्त उपसुचकमा आज निकै राम्रो वृद्धि देखिएको छ। लघुवित्त कम्पनीहरुको आज सर्किट माथि सर्किट लागेको थियो । लघुवित्त उपसुचकमा ८ दशमलव ७४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। सम्पूर्ण उपसुचकमा वृद्धि देखिएकोमा वाणिज्य बैंक उपसुचकमा पनि ३ प्रतिशत माथि वृद्धि देखिएको छ।
दोश्रो बजार २५१७ को विन्दुमा खुलेकोमा २५८६ को उच्च विन्दु सम्म पुगेको थियो । नेप्सेको आज न्यून विन्दु २५३८ रहेको छ ।
बजार २५०० विन्दु माथि बन्द भए पश्चात केही करेक्सन देखिएको छ। जानकार अनुसार बजार अब ३००० को यात्रामा गएको बुझ्न सकिन्छ। करेक्सन हुँदै वृद्धि भएको बजार दिगो हुने र ३००० को यात्रा अघि बजारले करेक्सन पार गरेको छ। बजार वृद्धि भए संगै आज कारोवार रकम पनि वृद्धि भएको छ। यसलाई सकारात्मक मानिन्छ। त्यस्तै बजार बन्द हुँदा निकै आकर्षक ग्राफ बनाउदै बन्द भएको छ।
जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण ७ दिन पहिले
आजको बजार बढे पनि मैनबत्ती रातो हुनुको यस्तो छ कारण ३ हप्ता पहिले
बजारको आजको करेक्सनलाई कसरी हेर्ने ? ३ हप्ता पहिले
बजारले २५०० को यात्रा तय गर्दा के छन् बजारका आजका सकारात्मक पक्षहरु ? १ महिना पहिले
प्रचण्डसँग सूचना चुहाएको आरोपमा गृहमन्त्रीले स्वकीय अधिकृतलाई हटाए ३ मिनेट पहिले
शुरु भयो सेतो मच्छिन्द्रनाथको पुनर्निर्माण ७ मिनेट पहिले
साइबर ब्युरोको नक्कली फेसबुक पेज बनाउने पक्राउ ९ मिनेट पहिले
अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रुपन्देहीको जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न, केन्द्रीय अध्यक्ष पाठकसहित ६ शिक्षक सम्मानित १५ मिनेट पहिले
उपहार पर्‍यो भन्दै ठगी गर्ने ३ जना प्रहरी नियन्त्रणमा ३ दिन पहिले
जङ्गलमा लागेको आगो तीन दिनपछि नियन्त्रणमा ६ दिन पहिले
निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशङ्का गर्नुपर्ने कामै छैन : पोखरेल ६ दिन पहिले
पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि कालिका दर्शन वर्ष मनाईदै ७ दिन पहिले
भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख भन्दा बढी ४ हप्ता पहिले
बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै चितवनमा चार ट्रक तोडफोड ३ हप्ता पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीले जनतासँग माफी माग्‍नु पर्छ : पौडेल ७ दिन पहिले
कालिकोटमा पहिरोले घर पुरिँदा ६ जनाको मृत्यु ७ महिना पहिले
देवताका धामीबाटै छाउ प्रथा हटाउने प्रतिबद्धता, अबदेखि पर सर्दा घरमै बस्ने १ वर्ष पहिले
कोरोनाले धरानमा २२ बर्षकै युवतीको ज्यान गयो ३ महिना पहिले